गढीमाई मेलामा १० दिन विद्यालय बन्द हुने | Ratopati
personरासस exploreबारा access_timeमंसिर ३, २०७६ chat_bubble_outline1
कलैया । महागढीमाई नगरपालिका–१ स्थित गढीमाईको मेलालाई लक्ष्य गरी १० दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । मेला भर्नका लागि नेपाल र भारतबाट आउने लाखौँ भतmजनको सुविधाका लागि नगरभित्रका सबै सरकारी विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय भएको नगर शिक्षा समितिका सदस्य परमहंस यादवले जानकारी दिए ।
Nov. 20, 2019, 1:02 a.m. Chandra
भगवान र देबीको नाममा गरिने लाखाैँ अबोध र निरीह प्राणीको "भोग" वा हत्या 21 साैँ शताब्दिमा एकदमै नसुहाउने कुरा हो! त्यसमाथि "बुद्द" जन्मेको देश र समाज मा यस्तो हुनु अझ स्कुल दस दस दिन बन्द गरेर : अन्धबिश्वास र मुर्खताको पनि हद हुन्छ नि!!!